ကောင်းသောကျစ်ကျစ်လစ်လစ်အမှုန့်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ရောင်းချသူများ | Banffee မိတ်ကပ်
Banffee Makeup - ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အလှဖန်တီးရှင်& စိတ်ကြိုက်အလှကုန်ထုတ်လုပ်သူ
Matte Eyeshadow ပါ။
Loose Setting Powder ၊
Compact Powder ပါ။
Non Stick Lip Gloss ပါ။
Lip Scrub ၊
Lip Balm ပါ။
အိမ် > ထုတ်ကုန်များ > မျက်နှာအလှပြင်ပစ္စည်းများ > Compact Powder ပါ။
အရောင် ၃ ရောင်သတ်သည်။ကျစ်လစ်သောအမှုန့် အတိမ်အနက်မှ နက်ရှိုင်းသော အရောင် ၃ ရောင်ရှိသည်။ အဖြူ ၊ နွတ် ၊ နက် ရောင် သည် အသားအရေ အမျိုးအစား အားလုံးအတွက် သင့်လျော်ပါသည်။ ကောင်းတယ်။ကြာရှည်ခံသော compact powder ရောင်းရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆက်သွယ်ရန် ကြိုဆိုပါတယ်။
အမှုန့်-အဲဒါ'ပျော့ပျောင်းပြီး ချောမွတ်သော အမျိုးအစား ဖိထားသော ကျစ်ကျစ်လစ်လစ်မှုန့်။ အဆီထိန်းခြင်းနှင့် ရေစိုခံခြင်းတွင် ကောင်းမွန်သော စွမ်းဆောင်ရည်ရှိသည်။ အလွန်မြင့်မားသော ရောင်ခြယ်ပစ္စည်းဖြစ်ပြီး ဝက်ခြံများ၊ ချွေးပေါက်များ၊ အမာရွတ်အနည်းငယ်စသည်ဖြင့် မျက်နှာအနာအဆာများကို အပြည့်အဝ ဖုံးအုပ်ပေးပါသည်။ Foundation နှင့် setting powder ကဲ့သို့တူညီသောလုပ်ဆောင်ချက်များပါရှိသည်။ အပြစ်အနာအဆာကင်းတဲ့ မျက်နှာလေးဖြစ်အောင် လွယ်ပါတယ်။
အထုပ်-အမှုန့်သည် အနက်ရောင် palette တွင်ပါရှိသည်။ အပြင်ဘက်တွင် အပူအလုံပိတ် ပလပ်စတစ်ဖလင်ဖြင့် အနက်ရောင် စက္ကူသေတ္တာတစ်ခုရှိသည်။
အလေးချိန်- အသားတင်အလေးချိန် 10g၊ စုစုပေါင်းအလေးချိန် 70g။
Banffee စက်ရုံမှမိတ်ကပ်အတွက် Banffee လက်ကားအမှုန့်
အဆီမပါသော၊ တောက်ပမှုနည်းသော POWDER- တစ်နေ့တာလုံး အပြစ်အနာအဆာကင်းသော တောက်ပမှုကို ထိန်းချုပ်ပေးပါသည်။ အဆီမပါသော noncomedogenic အမှုန့်သည် ချွေးပေါက်များကို ပိတ်ဆို့စေသည်
အကောင်းဆုံးဖိထားသောအမှုန့်ကုမ္ပဏီ - Banffee မိတ်ကပ်
အဆီမပါသော၊ တောက်ပမှုနည်းသော POWDER- တစ်နေ့တာလုံး အပြစ်အနာအဆာကင်းသော တောက်ပမှုကို ထိန်းချုပ်ပေးပါသည်။ အဆီမပါသော noncomedogenic အမှုန့်သည် ချွေးပေါက်များကို ပိတ်ဆို့စေသည်ကြာရှည်ခံမိတ်ကပ်- ကျွန်ုပ်တို့၏ 16 နာရီကြာရှည်ခံ ၀တ်စုံဖိထားသော အမှုန့်သည် ဘယ်သောအခါမှ ကိတ်မုန့်ဖြစ်ပြီး ခြောက်သွေ့ခြင်း သို့မဟုတ် ကွဲအက်ခြင်း မရှိပါ။
Intro Banffee မိတ်ကပ် compact powder စက်ရုံထုတ် စျေးနှုန်း OEM ODM အော်ဒါမှာပါတယ်။
ဤဖိသိပ်ထားသော အမှုန့်၏ လက္ခဏာများ-မြင့်မားသော ရောင်စုံ၊ ရေစိုခံ၊ ကြာရှည်ခံ၊ အနုမှုန့်၊ အဆီထိန်း၊ ကွန်ဆီလာ၊ အပြည့်အ၀ ဖုံးအုပ်မှု၊ ချို့ယွင်းချက်မရှိ၊ Matte၊ အရောင်မျိုးစုံ၊ Vegan၊ အော်ဂဲနစ်၊ ရက်စက်မှုကင်းသည်၊ လှုံ့ဆော်မှုမရှိ၊ ပျော့ပျောင်း၊ အန္တရာယ်မရှိ၊ သဘာဝ။ကျွန်ုပ်တို့၏ အားသာချက်များ-1. Hot Sale 5000 pcs ကျွန်ုပ်တို့သည် ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်တွင် လစဉ်တင်ပို့ပါသည်။2. အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များ။3. တတ်နိုင်သောစျေးနှုန်း စက်ရုံတိုက်ရိုက်ရောင်းချခြင်း။4. နမူနာကို စတော့ရှယ်ယာတွင် ရနိုင်ပါသည်။5.7ရက်အတွင်း အမြန်ပို့ဆောင်ခြင်း။မှာယူမှုအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ရန် ကြိုဆိုပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
စိတ်ကြိုက် Banffee အလှကုန်ဖိမှုန့် စိတ်ကြိုက်လိုဂို သီးသန့် lable low moq မိတ်ကပ်မျက်နှာမှုန့် ထုတ်လုပ်သူ China
ကျစ်လစ်သောအမှုန့်ကို စမတ်ကျကျ အနက်ရောင်အဝိုင်းပြားဖြင့် ပါရှိသည်။ အထဲမှာ သပ်ရပ်လှပတဲ့ ရေမြှုပ်တစ်ခု ပါရှိပါတယ်။အမှုန့်သည် နူးညံ့သည်၊ ပါးလွှာသည်၊ ပေါ့ပါးသည်။ နူးညံ့ချောမွေ့ပြီး အသားအရေအမျိုးအစားအားလုံးနဲ့ လိုက်ဖက်ပါတယ်။ ဤမြင့်မားသော ရောင်ခြယ်မှုန့်ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ချွေးပေါက်များ သို့မဟုတ် အခြားမျက်နှာကို အပြစ်ကင်းစင်အောင် ဖုံးကွယ်ရန် လွယ်ကူပါသည်။ နူးညံ့ပြီး သဘာဝအတိုင်း မြန်မြန်ဆန်ဆန် မိတ်ကပ်လိမ်းပေးနိုင်ပါတယ်။ ရေစိုခံ ၊ ချွေးထွက်များ ၊ အဆီပြန်ခြင်းကို ထိန်းညှိပေးသော ဇာတ်ကောင်များဖြင့် သင့်မျက်နှာကို တစ်နေ့တာလုံး လန်းဆန်းနေစေမည်ဖြစ်သည်။ဤဖိသိပ်ထားသော အမှုန့်၏ လက္ခဏာများ-မြင့်မားသော ရောင်စုံ၊ ရေစိုခံ၊ ကြာရှည်ခံ၊ အနုမှုန့်၊ အဆီထိန်း၊ ကွန်ဆီလာ၊ အပြည့်အ၀ ဖုံးအုပ်မှု၊ ချို့ယွင်းချက်မရှိ၊ Matte၊ အရောင်မျိုးစုံ၊ Vegan၊ အော်ဂဲနစ်၊ ရက်စက်မှုကင်းသည်၊ လှုံ့ဆော်မှုမရှိ၊ ပျော့ပျောင်း၊ အန္တရာယ်မရှိ၊ သဘာဝ။
OEM မိတ်ကပ်မှုန့်သည် အရောင်3ရောင်ပါသော ချောမွေ့သော ဖောင်ဒေးရှင်းမှုန့်
ကျစ်လစ်သောအမှုန့်ကို စမတ်ကျကျ အနက်ရောင်အဝိုင်းပြားဖြင့် ပါရှိသည်။ အထဲမှာ သပ်ရပ်လှပတဲ့ ရေမြှုပ်တစ်ခု ပါရှိပါတယ်။အမှုန့်သည် နူးညံ့သည်၊ ပါးလွှာသည်၊ ပေါ့ပါးသည်။ နူးညံ့ချောမွေ့ပြီး အသားအရေအမျိုးအစားအားလုံးနဲ့ လိုက်ဖက်ပါတယ်။ ဤမြင့်မားသော ရောင်ခြယ်မှုန့်ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ချွေးပေါက်များ သို့မဟုတ် အခြားမျက်နှာကို အပြစ်ကင်းစင်အောင် ဖုံးကွယ်ရန် လွယ်ကူပါသည်။ နူးညံ့ပြီး သဘာဝအတိုင်း မြန်မြန်ဆန်ဆန် မိတ်ကပ်လိမ်းပေးနိုင်ပါတယ်။ ရေစိုခံ ၊ ချွေးထွက်များ ၊ အဆီပြန်ခြင်းကို ထိန်းညှိပေးသော ဇာတ်ကောင်များဖြင့် သင့်မျက်နှာကို တစ်နေ့တာလုံး လန်းဆန်းနေစေမည်ဖြစ်သည်။ဤဖိသိပ်ထားသော အမှုန့်၏ လက္ခဏာများ-မြင့်မားသော ရောင်ခြယ်၊ ရေစိုခံ၊ ကြာရှည်ခံ၊ ချောမွတ်သော အမှုန့်၊ အဆီထိန်းချုပ်မှု၊ ဖုံးကွယ်မှု၊ အပြည့်အ၀ ဖုံးအုပ်မှု၊ ချို့ယွင်းချက်မရှိ၊ Matte၊ အရောင်မျိုးစုံ၊ သတ်သတ်လွတ်၊ အော်ဂဲနစ်၊ ရက်စက်မှုကင်းသည်၊ လှုံ့ဆော်မှုမရှိ၊ ပျော့ပျောင်း၊ အန္တရာယ်မရှိ၊ သဘာဝ။
Intro to Banffee ရေစိုခံ အပြစ်အနာအဆာနည်းသော ဖောင်ဒေးရှင်း Face Powder စိတ်ကြိုက်လိုဂို အမျိုးသမီးများ Powder foundation Banffee Makeup
ဖောင်ဒေးရှင်းကို အအေးခံထားသော စတုရန်းပုလင်းဖြင့် ထည့်ထားသည်။ ပမာဏ 35ml ကျယ်ဝန်းပြီး အဖြူမှ အမှောင်အထိ အရောင် 10 ရောင်ရှိသည်။ ပွင့်လင်းမြင်သာသော ကောက်ကြောင်းများဖြင့် အရောင်များကို ကြည့်ရန် လွယ်ကူသည်။ဖောင်ဒေးရှင်းအရည်တွင် နူးညံ့သော၊ ပါးလွှာသော၊ ပေါ့ပါးသောအမှုန့်များပါရှိသည်။ မျက်နှာပေါ်က ချွေးပေါက်တွေနဲ့ အပြစ်အနာအဆာတွေကို အလွယ်တကူ မမြင်နိုင်စေပါဘူး။ နူးညံ့ချောမွေ့ပြီး အသားအရေအမျိုးအစားအားလုံးနဲ့ လိုက်ဖက်ပါတယ်။ နူးညံ့ပြီး သဘာဝမိတ်ကပ်ကို အလွယ်တကူ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ သင့်မျက်နှာကို အစိုဓာတ်ထိန်းထားရန် သဘာဝပါဝင်ပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ ရေစိုခံ ၊ ချွေးထွက်များ ၊ အဆီပြန်ခြင်းကို ထိန်းညှိပေးသော ဇာတ်ကောင်များဖြင့် သင့်မျက်နှာကို တစ်နေ့တာလုံး လန်းဆန်းနေစေမည်ဖြစ်သည်။ဤအခြေခံအုတ်မြစ်၏ဇာတ်ကောင်များမြင့်မားသော ရောင်ခြယ်၊ ရေစိုခံ၊ ကြာရှည်ခံ၊ ချောမွတ်သော အမှုန့်၊ အဆီထိန်းချုပ်မှု၊ ဖုံးကွယ်မှု၊ အပြည့်အ၀ ဖုံးအုပ်မှု၊ ချို့ယွင်းချက်မရှိ၊ Matte၊ အရောင်မျိုးစုံ၊ သတ်သတ်လွတ်၊ အော်ဂဲနစ်၊ ရက်စက်မှုကင်းသည်၊ လှုံ့ဆော်မှုမရှိ၊ ပျော့ပျောင်း၊ အန္တရာယ်မရှိ၊ သဘာဝ။
Banffee 2021 သည် စတော့ရှယ်ယာနမူနာတွင် ရရှိနိုင်သော အကောင်းဆုံးရောင်းအားအကောင်းဆုံး compact powder အသစ်ပါ မျက်နှာမိတ်ကပ်အခြေခံဖောင်ဒေးရှင်း
Banffee အရည်အသွေးမြင့် OEM comapct အမှုန့် လက်ကားမိတ်ကပ်သီးသန့်တံဆိပ်ဖိမှုန့်
Banffee Pressed ဖောင်ဒေးရှင်းမှုန့်သည် matte နှင့် face pressed powder ဖြစ်သည်။
ကျစ်လစ်သောအမှုန့်ကို စမတ်ကျကျ အနက်ရောင်အဝိုင်းပြားဖြင့် ပါရှိသည်။ အထဲမှာ သပ်ရပ်လှပတဲ့ ရေမြှုပ်တစ်ခု ပါရှိပါတယ်။အမှုန့်သည် နူးညံ့သည်၊ ပါးလွှာသည်၊ ပေါ့ပါးသည်။ နူးညံ့ချောမွေ့ပြီး အသားအရေအမျိုးအစားအားလုံးနဲ့ လိုက်ဖက်ပါတယ်။ ဤမြင့်မားသော ရောင်ခြယ်မှုန့်ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ချွေးပေါက်များ သို့မဟုတ် အခြားမျက်နှာကို အပြစ်ကင်းစင်အောင် ဖုံးကွယ်ရန် လွယ်ကူပါသည်။ နူးညံ့ပြီး သဘာဝမိတ်ကပ်ကို လျင်မြန်စွာ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ရေစိုခံ ၊ ချွေးထွက်များ ၊ အဆီပြန်ခြင်းကို ထိန်းညှိပေးသော ဇာတ်ကောင်များဖြင့် သင့်မျက်နှာကို တစ်နေ့တာလုံး လန်းဆန်းနေစေမည်ဖြစ်သည်။ဤဖိသိပ်ထားသော အမှုန့်၏ လက္ခဏာများ-မြင့်မားသော ရောင်ခြယ်၊ ရေစိုခံ၊ ကြာရှည်ခံ၊ ချောမွတ်သော အမှုန့်၊ အဆီထိန်းချုပ်မှု၊ ဖုံးကွယ်မှု၊ အပြည့်အ၀ ဖုံးအုပ်မှု၊ ချို့ယွင်းချက်မရှိ၊ Matte၊ အရောင်မျိုးစုံ၊ သတ်သတ်လွတ်၊ အော်ဂဲနစ်၊ ရက်စက်မှုကင်းသည်၊ လှုံ့ဆော်မှုမရှိ၊ ပျော့ပျောင်း၊ အန္တရာယ်မရှိ၊ သဘာဝ။
Banffee organic vegan mineral pressed powder သည် ကြမ်းတမ်းသော အန္တရာယ်ကင်းသော ဓာတုပါဝင်ပစ္စည်းမိတ်ကပ်
funditon palette မျက်နှာမိတ်ကပ်နှင့်အတူ Banffee မျက်နှာအမှုန့်